inona ny angovo mihetsika? Izay rehetra tokony ho fantatrao | Fitaovana maimaim-poana
inona ny angovo mihetsika? Ny tokony ho fantatrao
La angovo mihetsika Hevitra tsy fantatry ny maro izy io, nefa mety hahaliana azy tokoa. Indrindra raha mitady hitahiry zavatra ao an-tranonao na volavolan-dalàna momba ny herinaratra ianao. Raha ny marina dia hitanao fa hita taratra ao amin'ny volanao angovo izany ary tsy noraharahinao izany.
Rehefa voadinika io angovo mihetsika io dia teny iray milaza izany tambajotra sinusoida, harmonika, effets joule avy amin'ny tambajotra, sns. Hevitra somary hafahafa ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa tsy mahalala izay lazainy. Fa eto dia azonao atao amin'ny fomba tsotra hoe inona izany.
1 Inona no atao hoe angovo mihetsika?
2 Azo esorina ve io vidiny io?
2.1 Tena mitsitsy ve ireo banky capacitor ireo?
2.2 Inona avy ireo marika tsara indrindra?
Inona no atao hoe angovo mihetsika?
Rehefa miresaka tamba-jotra elektrika ianao dia afaka miresaka momba ny angovo tanteraka, izay no miharihary. Ity ny habetsaky ny angovo roa, na amin'ny teny hafa, dia azo ovaina ho karazana hery roa samy hafa:
Angovo miasa: io no tena lasa miasa (na hafanana). Izany hoe ilay ampiasain'ny masinina ary mijanona mifandray amin'ny tambajotra. Ohatra, ilay mandany fatana, jiro, fahitalavitra, fitaovana sns. Izy io dia refesina amin'ny kWh.
Angovo mihetsika: Ity angovo phantom hafa ity dia tsy laniana amin'ny fampiasana azo ampiharina. Amin'ity tranga ity dia refesina amin'ny kVArh (kilovolt-ampere reactive isan'ora). Izy io dia mifandray amin'ireo fitaovana mampiasa coil, toy ny milina indostrialy, fantsona fluorescent, paompy, motera elektrika, sns.
Mety manontany tena ianao fa raha tsy lany ny angovo mihetsika dia maninona Farany dia miampanga anao amin'ny faktioran-jiro ianao. Ny antony dia, na dia tsy mila hamokarana aza izy io dia tsy maintsy entina, satria tonga ary mandeha amin'ny fanjifana tambajotra 50 heny isan-tsegondra (miasa any 50Hz ny tambajotra fifandimbiasana eoropeanina ankehitriny. Izany dia miteraka fiovaovan'ny hamafin'ny herinaratra ao amin'ireo boriborintany, izay miteraka fihoaram-pefy amin'ny tsipika fanovana sy ireo mpamokatra herinaratra. Noho izany dia ilaina ny manilika na manonitra azy.
Izany no mahatonga ny orinasa angovo tsy maintsy manao fampiasam-bola bebe kokoa amin'ny fitaovana famokarana, ary amin'ny tsipika misy fahaiza-mizara bebe kokoa, ary koa ny trafo ho an'ny fitaterana sy fanovana an'io angovo miasa io. Ireo vola lany rehetra ireo dia omena ihany koa ho an'ny angovo mihetsika.
Azo esorina ve io vidiny io?
Araka ny lalàna Espaniola, raha toa ka fanjifana herinaratra reactive avo kokoa noho ny 33% amin'ny angovo mavitrika nohanina, noho izany dia handoa 4.15 cents isan-kVArh ianao. Etsy ankilany, raha avo kokoa noho ny 75% ny angovo mavitrika nohanina dia hiakatra hatrany amin'ny 6.23 cents euro isaky ny kVArh izany.
Mba hampihenana na hanonerana ny vidin'ny angovo mihetsika, a capacitor banky. Mba hanaovana izany dia tokony hifandray amina teknisiana ianao ary hizaha ny teti-bola, satria tsy maintsy vidiny voafehy izany izay manonitra izay ho tahirinao. Raha toa ka kely noho ny vidin'ny fametrahana ny zavatra ho tahirinao, dia tsy hanonitra izany ... Amin'ny ankapobeny dia manonitra izy io, ary afaka fotoana fohy dia azonao averina ny fampiasam-bola.
Ireo banky capacitor ireo tsy hialana amin'ny sazy manelingelina fotsiny Noho io angovo mihetsika io dia mamela ihany koa izy ireo hampiorina ny fampiasa amin'ny tambajotra sy ny kalitaon'ny famatsiana, ka hankafizin'ny fitaovanao rehetra mifandraika izany. Izy ireo dia manafoana ny angovo tsy misy ilana fitakiana tariby mitondra herinaratra ary manatsara ny herin'ny herinaratra.
Su ny fandidiana dia tena tsotra sy mahomby. Ireo fitaovana ireo dia mampiasa mpandrindra iray izay mandika ireo fambara nalefan'ireo fitaovana fanampiana ary mamaritra ny hery mihetsika izay tsy maintsy tambiny isaky ny fotoana. Miorina amin'izany, hanafatra andiana hetsika (dingana misy ny capacitor izay hampifandraisiny na hamafana raha ilaina izany) hanoherana.
Araka ny hita amin'ny horonantsary dia tsy maintsy izany mifandray amin'ny tontonana ankapobeny amin'ny fametrahana an'ny orinasa na tranonao. Ny teknisianina dia afaka manatanteraka an'io fihaonana io soa aman-tsara ary koa hamakafaka ny filan'ny mpanjifa tsirairay hanitsy ny fametrahana azy mba hanomezana valiny tsara indrindra.
Tena mitsitsy ve ireo banky capacitor ireo?
Eny, ireo singa ireo dia mahavita manonitra an'io angovo mihetsika io tsara, mampihena ity foto-kevitry ny volanao ity. amin'ny € 0. Noho izany dia handoa ny angovo miasa ianao, izay tena laninao amin'ny zavatra mahasoa. Ho fanampin'izany, ianao koa dia hisoroka ny VAT mifandraika amin'ny angovo mihetsika. Noho izany, ny tahiry isan-taona dia mety ho be. Betsaka kokoa amin'ny orinasa.
Inona avy ireo marika tsara indrindra?
Raha liana ianao mividy iray amin'ireo banky capacitor ireo ho an'ny elektrisianina hametraka azy ireo dia tokony ho fantatrao ny sasany aminy ny marika tsara indrindra:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » General » inona ny angovo mihetsika? Ny tokony ho fantatrao
Jiro lava: ny fomba fanaovana an-trano
Karazana fanontana 3D: izay rehetra ilainao ho fantatra momba an'io teknika io